Sportswear indasitiri iri kutarisa kukura kwakakura mune itsva zvakajairwa
Sekureva kweshumo rapfuura raMcKinsey & Kambani, makambani enhumbi dzemitambo uye zvigadzirwa vakaona kukosha kwavo kwemusika kuchidonha mumwedzi yekutanga yedenda. Zvisinei, ivo vaiwanzoita kunze kwekuenzanisa kana vachienzaniswa nemamwe ese indasitiri yenguo sezvo gore richifambira mberi. Zvikwata zvakaita New Bala ...
China inokura YoY kekutanga mu2020 mune yayo yekutengesa nguo ... Nyamavhuvhu ndiwo mwedzi!
China yakaona kukura kwakakura mumachira uye machira ayo anotumirwa kunze kwenyika ne5,62 muzana kusvika US $ 187.41 bhiriyoni muna Ndira kusvika Nyamavhuvhu 2020, sekune Ministry of Industry and Information Technology (MIIT), China. Textile kunze kwenyika, kunyanya, yakapa US $ 104.80 bhiriyoni, ichikura b ...
China yaNovember kutengesa kunze kwenyika inokwira ne21.1% pane yakasimba kudiwa kwepasirese, ichirova fungidziro
Yakavandudzwa 2020.12.07 15:34 GMT + 8 NaHeather Hao, Yao Nian China kunze kwenyika munaNovember yakakwira nekukurumidza kupfuura kwese kubva muna Kukadzi 2018, ichibatsirwa nechisimba kudiwa kwepasirese kwezvigadzirwa zvemabhizimusi uye mbishi zvigadzirwa, data kubva kuGeneral Administration yeCustoms yakaratidza Muvhuro . Kutengesa kunze kwakasimudzwa ne21.1 p ...
Ndezvipi zvipfeko zveUS zvinounza data zvinoreva kuIndia, Bangladesh neChina?
Dhata inoratidza kuti mashandiro eChina muna Chivabvu kusvika Nyamavhuvhu 20 nguva yekuwedzera kukosha kwayo kuendesa 35.61% uye 45.19% vhoriyamu pane kutengesera kuUnited States panguva yaNdira kusvika Kubvumbi 20, zvese nekuda kwekudzikisira kukuru mutengo weyuniti wave China kwenguva yakareba kudzikisa iyo unit ...
Covid akachinja kutenga zvachose. Hezvino zvazvinoreva kune ako aunofarira zvitoro
Denda reCovid-19 rakurudzira shanduko yekutenga pamhepo. Zvitoro zviri kushandurwa kuita mini matura, zvichibatsira kuzadzisa online maodha muchikamu chidiki chenguva - uye nemutengo wakaderera. Uye apo zvitoro munzvimbo dzakapoteredzwa dzezvitoro zviri kuvhara nekuda kwekunonoka kwetsoka traffic uye kudonha ...